Moovly: Chepụta Vidio Animated, Mgbasa ozi Pụrụ Iche ma ọ bụ Infographics | Martech Zone
Moovly: Chepụta vidiyo vidiyo, Mgbasa ozi Banyere ma ọ bụ Infographics
Anyị mmebe kemgbe ike na-arụ ọrụ, na-adịbeghị anya na-amị ihe animated video maka Right On Mkparịta ụka. Ewezuga mgbagwoju anya nke mmegharị ahụ, ịtụgharị ụfọdụ vidiyo na-ewe ọtụtụ awa iji ngwa ọrụ desktọọpụ ọkọlọtọ. Moovly (nke dị ugbu a na beta) na-atụ anya ịgbanwe nke ahụ, na-enye ikpo okwu nke na-enye onye ọ bụla ohere ịmepụta vidiyo dị egwu, mgbasa ozi ọkọlọtọ, nkwukọrịta mmekọrịta na ọdịnaya ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ.
Moovly bụ ngwa dị n'ịntanetị dị mfe nke na - ahapụ gị ịmepụta ọdịnaya na - aga n'ihu na - enweghị ike ịbụ ọkachamara na ntanetị. Creatmepụta ọdịnaya mgbasa ozi bara ụba dị ugbu a dị mfe dị ka ịmepụta slide PowerPoint. Moovly dị mfe iji ma mee ka mmadụ niile dị ka pro multimedia.
Ihe Nlereanya nke ojiji si Moovly saịtị:
Eserese vidiyo - Jiri Moovly mepụta vidiyo ụlọ ọrụ, ihe ngosi ngwaahịa, nkuzi mara mma ma ọ bụ otu esi-vidiyo n'ụzọ dị mfe ma kwụ ọtọ. Tinye olu, ụda na egwu ma mekọrịta ihe niile site na iji usoro iheomume dị mfe. Kwusaanụ vidiyo gị na Youtube, Facebook, tinye ya na weebụsaịtị gị ma ọ bụ budata ya maka iji offline.
Okwu onyinye 3.0 - Chefuo banyere slide. Gbado anya na isiokwu gị ma gbakwunye visuals na usoro na-akpali akpali nke na-akwado ntụgharị na ihe ngosi na-adọrọ mmasị nke ndị na-ege gị ntị. Kwado okwu gi n'uzo ohuru ma odi nfe. Mfe tọghata gị ngosi ka a video na Anglịkan.
Ngosipụta Mgbasa ozi - Dọrọ uche gaa na mmegharị: mepụta ọkọlọtọ nke gị, skyscraper ma ọ bụ mgbasa ozi ngosi ndị ọzọ maka ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ weebụsaịtị ndị ọzọ. Chepụta ọmarịcha animated nkwalite, ọkwa ma ọ bụ ozi ndị ọzọ maka ihe ọ bụla na ihuenyo: telivishọn, narrowcasting, ama, mbadamba,… Oyiri otu mbipute ka ọtụtụ ọdịiche na-amasị gị, ọbụna ndị ọzọ akụkụ.
Infographics mmekọrịta - Kwado akụkọ gị site na iji ngosipụta ihe ngosi nke ozi, ọnọdụ, ọnụọgụ ma ọ bụ data ndị ọzọ. Jiri eserese, eserese, ihe osise na ihe ngosi ndị ọzọ mara mma iji gosipụta nghọta gị, nyocha ma ọ bụ akụkọ. Mee ka ihe omuma ihe omuma gi: mee ka ndị na-ege gị ntị chọpụta ozi ndị ọzọ site na iji oke ma ọ bụ ịpị site na omume, mmapụta na mmekọrịta ndị ọzọ.
Obere vidiyo - Jiri Moovly mepụta vidiyo egwu gị. Bulite egwu egwu mp3, gbakwunye onyonyo, egwu, ihe eserese ma ọ bụ ọbụlagodi vidio vidio. Mekọrịta mmemme gị na ịkụ aka na mbupụ okike gị iji soro ndị enyi gị kerịta ya.
E-kaadị - Chepụta e-kaadị gị ma ọ bụ akwụkwọ ịkpọ oku ịntanetị maka oge ọ bụla. Na-eju ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị anya site na ozi mbụ ma ọ bụ ọkwa ọkwa. Ikpokọta foto, ihe onyonyo na ederede n'ime ịkpọ oku ma ọ bụ ọchịchọ dị n'ịntanetị. Kwusaa ihe okike gị na Facebook, Youtube ma ọ bụ… na Moovly!
Tags: ihe omuma ihe omumavidiyo na-eseAnimationikpo okwu animationmmekọrịta mmekọrịtamoovly
B2B Strategies Strategies maka 2013 na karịrị
Chei, aga m elele nke a n'ezie.